ယွန်း: ဟယ်ရီပေါ်တာ မှော်ကစားကွင်း ဖွင့်လှစ်
ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ က စပြီး ဟယ်ရီပေါ်တာကစားကွင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါ တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုကစားကွင်းကြီးကို အချိန်၅နှစ်တာ အချိန်ယူပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ရသည်။ လာရောက်လည်ပတ်သူများမှာ
ဟယ်ရီပေါ်တာ လောကထဲသို့တကယ်ရောက်ရှိ နေသကဲ့သို့ခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။
ဖွင့်ပွဲနေ့ တွင်ပင် လူ၅၀၀၀ကျော်မှာ ကစားကွင်းထဲသို့ ဝင်ရန် တန်းစီစောင့်မျော်နေကြသည်ဆို၏ ။
ဖွင့်ပွဲအခန်းအနားကို ဟယ်ရီပေါ်တာမင်းသား DANIEL RADCLIFFE နှင့် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်
RUPERT GRINT နှင့် ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သူအချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
(သူတို့ ပုံလေးတွေက ရုပ်ရှင်ထဲက အမြဲတွေ့ နေမြင်ကျ ၀တ်စားပုံမဟုတ်ပဲ အပြင်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ မျက်လုံးထဲမှာ တမျိုးလေးဆန်းနေသလိုပါပဲ )
(ဟယ်ရီပေါ်တာ စာအုပ်ရေးသူ စာရေးဆရာမ J.K.ROWLING (အပြာရောင်ဝတ်စုံနှင့် )
အရမ်းမိုက်တယ်...ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ရောက်ဖူးချင်လာပြီ.. :P
ပုံတွေကြည့်ပြီးတော့အဲဒိနေရာကို အလည်တစ်ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်မိတယ်။
သူငယ်ချင်းတို့ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆို၇င် ဒီနေရာလေးမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒိပန်းခြံထဲကို
တကယ်ရောက်သွားသလို ခံစားစေနိုင်တဲ့ 3Dပုံရိပ်လေးတွေပါ။ တမျိုး ပျော်စရာတော့ကောင်းပါတယ်။
လူကြီး >>>170 US
ကလေး (၃နှစ် -၉နှစ်)>>> 150 US
( p.s လက်မှတ်တွေဈေးကြီးလို့ယွန်းတော့ မသွားနိုင်သေးဘူးးးးး ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်မိတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ 
သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပို့ စ်ကိုရေးမိတဲ့ ယွန်းအပြစ်ဟုတ်ကြောင်းပါ :D )
အမျိုးအစား ဓာတ်ပုံ, ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး
ညီမရေ မျှဝေမှု့တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်
ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ။ တကယ့်ကို သားသားနားနားပါဘဲ။
နောက်လဲ အလည်လာရအောင် လင့်ခ်ပါ တစ်ခါထဲ ယူသွားပါတယ်။
kokomaung.uk >>> လင့်ခ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော် ..
မြတ်မွန် >>> အကြံတူနေပြီ :p
အရမ်းမိုက်တာပဲ .. သွားချင်လိုက်တာ .. :D
ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ရောက်ချင်လိုက်တာ
ဟယ်ရီပေါ်တာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး စာအုပ်ရော ရုပ်ရှင်ရော အမှတ်တရပစ္စည်း အတွက်ရော လူတွေသုံးစွဲခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေကအများကြီးပဲ ဖြစ်မှာနော်။
နေပြည်တော်မှာ ဖွင့်မှာပဲ သွားလိုက်တော့မယ်း)
မြစ်ကျိုးအင်း>>> နေပြည်တော်မှာ ဖွင့်ရင် လက်တို့ လိုက်ဦး..
ယွန်း လည်းသွားချင်လို့ ...:p
Thanks .... I really love that place :D Universal Orlando !!!!